Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal विदेश बसेर दशैंको टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ? यो हो उत्तम साइत - Pnpkhabar.com
विदेश बसेर दशैंको टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ? यो हो उत्तम साइत
काठमाडौं, असोज ९ : अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले विभिन्न देशमा दशैंको टिकाको साइत सार्वजिनक गरेको छ। समितिको असोज पाँच गते बसेको बैठक टिकाको साइत सार्वजनिक गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष डाक्टर माधव भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती अनुसार नेपालमा अक्टोबर आठमा विहान १० बजेर ३५ मिनेट उत्तम साइत भनेको छ। त्यस्तै भारतमा आठ अक्टोबरको विहान १० बजेर १९ मिनेटको समय उत्तम भनेको छ।
त्यस्तै अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सात अक्टोबरमा विहान ११ बजेर २१ मिनेटमा उत्तम साइत भनेको छ। त्यस्तै अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा आठ अक्टोबर विहान आठ बजेर २१ मिनेटमा टिका लगाउने उत्तम साइत छ। हेर्नुहोस् कहाँ कुन समयमा टिका लगाउने